Ihe onyonyo ohuru na-egosi na iPhone ọzọ ga-akpọ iPhone 6SE | Akụkọ akụrụngwa
Ọnwa ole na ole tupu mbido ọrụ nke iPhone SE, iPhone ọhụrụ nke Apple jirila laghachi na ihuenyo 4-inch, ọtụtụ bụ asịrị gbara gburugburu aha nwere ike ịnwe ngwaọrụ a. Onye were ike kacha ike bụ iPhone 5SE, nke na-ahụ ya site n’ebe dị anya dịka ọ dị ugbu a, ọ baghị uru ịgbaso nọmba 5, ọtụtụ afọ ọ hapụsịrị ya. N'ihi ya, a na-akpọ ya SE.
Izu ole na ole gara aga, asịrị malitere ọhụụ na-ekwu na ụlọ ọrụ Cupertino nwere ike ịhọrọ ịkpọ aha ọhụrụ iPhone 7, iPhone 6SE, n'ihi na ọ bụ ịga n'ihu nke ụdị ugbu a na nke gara aga, iPhone 6 na iPhone 6s. Isi iyi na-azọrọ akụkọ a kwuru na rụrụ ọrụ na ịkọwapụta igbe nke ọnụahịa ndị a mana n'oge ahụ enweghị m ike ịnye foto ọbụla iji kwado ya.
Ekwuola ihe a ga-ekwe omume, mana oge a ya na onyogho na-akwado ohere a. Na foto ndị so isiokwu a, anyị nwere ike ịhụ foto dị iche iche nke igbe echere na ọ ga-esote iPhone nke ụlọ ọrụ ahụ ga-ebido na-enweghị akọwapụta ma ọ bụrụ na ọ bụ ụdị 4,7-anụ ọhịa ma ọ bụ ihe atụ 5,5-anụ ọhịa, nke ga-apụta doro anya na igbe buru ibu karịa obere ya. Akụkụ a na-eweta obi abụọ banyere eziokwu ya.
E bipụtara onyonyo ọhụụ a TechTastic na-ekwu na ha esila n'ichepụta igbe nke igbe nke ụdị ọhụrụ ahụ. Anyị niile maara na site na Photoshop anyị nwere ike ịrụ ọrụ ebube, na ọtụtụ bụ ụzọ nwere ike iji ngwa a iji nweta aha ọjọọ, ọkachasị ugbu a ụbọchị nke ngosi nke ụdị iPhone ọhụrụ dị nso ma dị nso, ndokwa maka Septemba 7 dị ka asịrị kachasị ọhụrụ.
Kwadoro: Dị ka m tụrụ anya na egosiri m n'isiokwu ahụ, eserese ndị a agbanweela digitally ma bụrụ ụgha kpamkpam, yabụ agaghị akpọ iPhone ọzọ iPhone 6SE.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » General » Ihe onyonyo ohuru na-egosi na iPhone ọzọ ga-akpọ iPhone 6SE
Kedu oge kacha mma iji zụta iPhone?